Tea isiphethu samanzi ashisayo uhlobo yaqala ukuvela ekuqaleni sibonga kwekhulu le-19 kuya ngamagugu abadumile French. Wawunamabhodi imikhumbi emibili zazo oxhumene by ngamapayipi ekhethekile. Phansi ingxenye lagcwala amanzi, yena owayenelegiyona; strainer engenhla, okwakubekelwa batheleka ikhofi. Idivayisi ke ngomlilo. Nge ukwanda kancane kancane ingcindezi uketshezi antante isitsha engenhla futhi ikhofi waphuzisa. Khona-ke kwehla emuva phansi. Inqubo iphutha kuze kube idivayisi ubelokhu umlilo. Umphumela waba olunamandla.
Ngokuhamba kwesikhathi, lo mklamo ethuthukisiwe, uhlukanisa ngezigaba 3: amanzi, ikhofi kanye ukulungele baphuze. Lolu ketshezi sidlula gumbi kanye kuphela, lapho ukunambitheka kanye nephunga elimnandi izinga ngcono.
Enye inzuzo obalulekile yilona Ukushisa kagesi. Tea isiphethu samanzi ashisayo uhlobo kulula futhi evumelana ukuyisebenzisa. It ngokuzenzakalelayo sivale usuku lokulungisela yalesi siphuzo. Ngaphezu kwalokho, akudingi ukuba khona komuntu ngalesi sikhathi. Ngaphezu kwalokho, ikhofi isiphethu samanzi ashisayo uhlobo lubaluleke bosomabhizinisi kanye isiphuzo okulungiselelwe emva kwamaminithi ambalwa. Kulula ukusebenzisa, futhi izindleko zalo bayowuthokozela nge.
idivayisi okunjalo isibe isici esisemqoka ekhaya Imishini kubantu abathanda isiphuzo okumnandi futhi elimnandi ibhalwe esifushane. Ngemva kokusebenza ikhofi umenzi engashiyi udoti. Kukhona ezinye amamodeli ziyakwazi ukukhiqiza hhayi nje ikhofi njalo futhi cappuccino, i-latte, nabanye abaningi zezinto eziphilayo yakhe. Kukhona isiphethu samanzi ashisayo coffeemakers lokungeniswa, lapho kulungiselelwa isiphuzo esihlwabusayo kwenzeka ngokusebenzisa ipuleti.
Kungenzeka bafudumale electric - akulona lonke uhlu izinzuzo zedivayisi. In esinjalo waphansi singavalwa ezahlukene ubuningi izingxenye kusuka ku 1 kuya 18. yisibonelo esihle kakhulu uyakwazi bakhiqize bafike 6 izinkomishi ngesikhathi ingxenye ukugcwaliswa 1. Libuye uzinake nokuba khona ukushisa ukumelana izibambo, ikhofi timer, kanye nekhono silondoloze lokushisa yalesi siphuzo siphelile isikhathi eside. Kungenxa lezi zinzuzo, amadivayisi njenge zithandwa.
Nebubi Geyser abenzi ikhofi
I ethile eyinhloko esikhundleni njalo okusefa gaskets. Ngaphezu kwalokho, umenzi ikhofi kufanele wageza emva ukusetshenziswa ngamunye. Odla we zokuhlunga noma ukuphepha umphini kuthinta ukunambitheka isiphuzo sokugcina.
Kuye uhlobo ikhofi umenzi walesi sakhi kungenzeka ezenziwe iphepha noma insimbi. Ukulungiselela yalesi siphuzo esebenzisa uhlobo yesibili ibizwa ngokuthi i-Indian. Kodwa leli phephandaba isihlungi yasungulwa eJalimane, ukuze inqubo sekulula kakhulu, kanye nomnikelo siphelile isikhathi eside iqukethe izinto eziyingozi. Abakwazi wakha phezu kobuso isisefo sensimbi futhi zigcine umkhiqizo osuphelile.
Ukuze ugweme lokhu, kubalulekile ukugeza umenzi ikhofi ngemva ukusetshenziswa ngamunye noma, esimweni iphepha izihlungi nje omunye esikhundleni sabo.
Tea isiphethu samanzi ashisayo uhlobo - Umgomo we operation
Okokuqala sidinga uthele ketshezi emgodleni ekhethekile iphuzu elithile. Khona-ke kuthathwe zekhofi bese bafakwa egumbini nge lemifanekiso. linezingxenye ezimbili kufanele ulingane siqinise nomunye, ngakho akudingeki ukuba ngokuwasha izitsha. Sonke lesi sakhiwo ibekwe phezu plate noma ixhunywe amapayipi. It kuncike hlobo ikhofi umenzi. Ngemva kwemizuzu embalwa wokusebenza, kuvela ikhofi okumnandi futhi elimnandi.
Uma une uhlobo ikhofi isiphethu samanzi ashisayo, ingosi zekhofi. Khona-ke isiphuzo lizwakale ngcono. Enye inzuzo yokuhamba kwesikebhe yalo mklamo ukuthi kungenzeka ukwenza hhayi kuphela ikhofi, kodwa futhi zezinkambi engamakhambi, futhi ubuchwepheshe kuzohluka akukho.
Ukuze ikhofi isiphethu samanzi ashisayo wakhonza isikhathi eside, kubalulekile ukuba esikhundleni gasket iraba, nokuhlanza lemifanekiso. Kusadingeka ukuqapha valve ukuphepha. Uma ivimbekile ke wageza ngamanzi afudumele, akufanele kube ukusebenzisa insipho ezahlukene kanye neziponji. Ngo inqubo udinga ukusebenzisa:
amanzi akuyona batheleka isitsha phezu wathi izici;
musa uthele lemifanekiso ikhofi kakhulu;
emva ngamunye Welding bahlanza isihlungi udonga.
For Amadivayisi yokukhiqiza oluvame ukusetshenziswa steel. Ngakho-ke geza isiphethu samanzi ashisayo ikhofi abenzi kungaba Umshini wokuwasha izitsha. Futhi ukukhiqiza onobuhle ngobumba, okuyinto zingafani ukuklanywa. It is hhayi Kunconywa ukusebenzisa kudivayisi aluminium ngoba isiphuzo zwa ezimbi. Leyo mikhumbi ezivamile yizona isiphethu samanzi ashisayo ikhofi abenzi Moka futhi Vitek.
Geyser ikhofi Moka
onobuhle okunjalo amadivayisi zenziwa kuphela ngesandla. Phakathi nenqubo ukukhiqizwa ziya izinyathelo ezifana imidwebo, yokuhlanza, wokucwebezelisa nokunye. D. Konke kwenziwa ochwepheshe abaqeqeshiwe. Ngaphezu kwalokho, Italian ikhofi isiphethu samanzi ashisayo uhlobo Moka itholakala color izikimu eziningi, ukuze kwaduma phakathi abasebenzisi. Umenzi inikeza njengesibonelo elincane 120 ml, futhi ezinkulu kuze kufinyelele 300 ml. Ububanzi kuhlanganisa imikhiqizo ezisetshenziswa lokungeniswa endzaweni lephephile. Firma Moka - nomkhiqizi kuphela okuveza kudivayisi aluminium. Ukukhiqizwa ilethwa emazweni ehlukene zezwe.
Abasebenzisi abaningi ukudumisa Geyser Moka ikhofi umenzi. Phakathi izinzuzo main - ukulungiswa okusheshayo isiphuzo. Ngemizuzu embalwa nje ungathola ikhofi okumnandi futhi elimnandi. Ngaphezu kwalokho, qaphela ukuklanywa, isibambo ukushisa ukumelana. Nge lingalungiswa ngaphandle 6 izingxenye. Coffeemakers isiphethu samanzi ashisayo uhlobo, intengo zazo dedengu ulele, okubangela nokungeneliseki kwabo abasebenzisi. Ichopho lokuqala kuziwa valve. A Ukushisa eqinile kungaba ukundiza emoyeni, futhi konke okuqukethwe kuzoholela ipuleti. Izindleko kwale divayisi ku uhla kusuka 1500 kuya ku-ruble 5000. Konke kuncike imodeli futhi isibalo ikhofi okulungiselelwe ngesikhathi esisodwa.
Geyser ikhofi Vitek
Tea Vitek uqinisekile ukuba ngilidlulisele labo bantu bathanda ukuphuza isiphuzo esihlwabusayo elimnandi njalo ekuseni. Ukulungiselela kuthatha imizuzu embalwa nje. Isakhiwo ngokwaso senziwa ephezulu amandla plastic, nophondo - metal. It has Ubukhulu amancane itholakala ngemibala eminingi. Nale umenzi ikhofi Vitek kahle kunoma iyiphi elingaphakathi. kwesigubhu Fluid evumela ukuba apheke ikhofi okumnandi kuwo wonke amalungu omndeni. Amandla Ukushisa isici 1050 W, esihlinzeka Ukushisa okusheshayo amanzi. Ngaphandle kwe-espresso, usebenzisa le imodeli, ungalungisa Latte, cappuccino kanye chocolate hot.
Amalungu coffeemakers yenkampani, udumisekile kakhulu. Ukulungiselela Kwenziwa angabacwasi ngokushesha. Coffee kuvela esiphundu futhi zibe nephunga elimnandi. I ethile kuphela ukuthi idivayisi kufanele ahlanze emva ukusetshenziswa ngamunye. izakhi odla kuholele Ukuwohloka ukunambitheka izici umkhiqizo. Izindleko walo mshini isimangaliso esiphakathi ruble 2500-6000. Kodwa kwemali esetshenziswe uyofaneleka ngokugcwele. Tea isiphethu samanzi ashisayo-hlobo izimpendulo zazo zingenalo ukugxekwa omkhulu imishini izinga.
ikhofi machine banamuhla bangasebenzisa izinto babe nezici eziningi. Konke kuncike okuthandayo. Uma udinga ukugcina kokuqendwa isiphuzo lokushisa, kungcono ukuthenga umshini, okungase ukushiya kubekwe ikhofi elishisayo for isigamu sehora. Ngo ukumisa yayo, amanye amamodeli abe nemishini ekhethekile yokuthungatha digital. Ngo steel kanye onobuhle Ceramic yekhofi imishini isiphethu samanzi ashisayo uhlobo ungalungisa amandla isiphuzo. Uma ukuthenga kufanele sinake ngosayizi. I emikhulu umshini, aba maningi amandla ako.
Coffeemakers isiphethu samanzi ashisayo uhlobo kukhona imishini izinga ukwenziwa ikhofi esihlwabusayo elimnandi. Ngenxa umthamo wabo isiphuzo ukulungiselela isifika emva kwamaminithi ambalwa. Ikakhulukazi kuyomthokozisa ngezamabhizinisi. Umgomo we operation ulula. Konke okudingeka uyenze - iwukuba uthele amanzi ethangini futhi uthele ikhofi. Izoqhubeka usebenze umshini. Amadivayisi anjalo angeke nje ajabulise abantu espresso, kodwa futhi cappuccino, i-latte futhi chocolate hot. Coffeemakers isiphethu samanzi ashisayo uhlobo bathethelele ngokugcwele imali wachitha. Uma ukhetha kufanele bacabangele esikuthandayo. Uma ufuna ukwenza isiphuzo wonke umndeni, kungcono ukukhetha idivayisi nge yenqwaba namandla eside.
I ethile eyinhloko imishini ikhofi ukuthi kudingeka bahlale ukugeza lemifanekiso ingcindezi impumuzo valve. Kuyinto kulezi zinto aqukethe izinto eziyingozi ezithinta impilo yabantu. Izindleko imishini enjalo iyahlukahluka ruble 2,000 5,000. Coffeemakers isiphethu samanzi ashisayo uhlobo ziyojabula wena obathandayo isiphuzo okumnandi futhi elimnandi.
Ngakho, lapho sathola khona ukuthi ziyini idivayisi bahlola izici zabo, kanye ngokucophelela ngobuhle nangobubi bawo. Nguwena ongazikhethela!
Thermometer ukuze Ohhavini - incazelo kanye izici
Meatballs nge sauce: ukupheka zokupheka
Modern amamitha kagesi. Indlela ukuthatha ukufundwa, yini izinhlobo ziyatholakala manje?